Xog Cusub: Doorashada Somalia ee 2020/2021 oo mabda ahaan heshiis laga gaarey ? | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog Cusub: Doorashada Somalia ee 2020/2021 oo mabda ahaan heshiis laga gaarey...
Xog Cusub: Doorashada Somalia ee 2020/2021 oo mabda ahaan heshiis laga gaarey ?
Iyada oo maalmihii u danbeeyey ay cakirneyd xaaladda siyaasadeed ee dalka, isla markaana ay mugdi ku jirtey sida la yeelayo haddii muddada dastuuriga ah uu ka dhamaado goloyaasha Dowladda Federaalka ayaa waxaa soo baxaya in uu jiro is afgarad guud oo laga gaarey nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa.
In Golaha Shacabku hakiyo hindisaha Xaliima Yareey keentay ee muddo kordhinta ah.
In Doorashado noqoto mid Dowlad goboleedyada iyo Dowladda Federaalku isla oggol yihiin.
in hoos loo daadejiyo, kuraasta la geeyo degmooyinka iyo gobolada,
in dadka soo dooranaya Xildhibaanada tiro ahaan ay ka badnaandaan tii hore oo la gaarsiiyo 250 iyo ka badan,
in kuraasta Aqalka Sare loo soo doorto si lamid ah tan Aqalka hoose,
in ergooyinka doorashada ka qaybgeleysa ay soo xulaan odoyaasha dhaqanka, Isimka guud ee ka mid ah 132 Isim uu saxiixo ergooyinka doorashada ka qaybgalaya.
Halka shirka lagu qabanaayo
Nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa
iyo metalaada Gobolka Banaadir
Previous articleHRW Describes Baseless Charges Against Prominent Somali Journalist
Next articleAkhriso: Lafta-gareen oo xil muhiim ah magacaabay & Arrinta ku khasabtay